Nuurdiin Xaaji oo Sheegay in Gacanta Lagu soo Dhigi doono Sarkaalada ku Kacay Falalka Musuqmaasuqa – The Voice of Northeastern Kenya
Nuurdiin Xaaji oo Sheegay in Gacanta Lagu soo Dhigi doono Sarkaalada ku Kacay Falalka Musuqmaasuqa
Agaasimaha dacwad soo oogida dalka Nuurdiin Xaaji ayaa wacad ku maray in gacanta lagu soo dhigi doono sarkaalada lagu tuhmayo in ay ku kaceen falal musuqmaasuq ah kuwaasi uu ula jeedo sarkaalo ka tirsan shirkada Kenya Pipeline.
Shalay ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay agaasimaha guud ee shirkadda dowlada u qaabilsan qeybinta shidaalka ee Kenya Pipeline, Joe Sang iyo 20 sarkaal oo kale ayaa maalinta isniinta maxkmada la soo taagi doono .
Saraakiisha kale ee la xiray ayaa kala ah xoghayaha shirkadda Gloria Khafafa, madaxa soo iibsashada qalabka Vincent Cheruiyot, maamulaha wax soo iibsiga ,Nicholas Gitobu iyo maareeyaha guud ee kaabayaasha Billy Aseka.
Waxaa dhammaantood loo haystaa fadeexad lagu lunsaday 9 bilyan oo shilin.
Tallaabada mas’uuliyiintan lagu xiray kadib ayuu xoghayaha wasaaradda shidaalka ee dalka Andrew Kamau shaaciyay in xilkii uu hayay Mr Sang uu si ku meel gaar ah ula wareegayo Mr Hudson Andambi .
Waaxda dambi baarista ee dalka ayaa sheegtay in sarkaaladaasi iyo mas’uuliyiin ka tirsan waaxda ceymiska caafimaadka ee dalka NHIF la soo taagi doono maxkamada si loogu soo oogo dacwad ka dhan ah dambiyadii ay galeen
Mr Nuurdiin Xaaji ayaa sido kale sheegay in la soo qaban doono sarkaalo kale oo ka tirsan waaxda ceymiska caafimaadka ee dalka NHIF.
← (Dhageyso) Haween Dugsi Quraan ka Furtay Mandera
Joyce Gwendo oo Lagu Xukumay 2 Sano Xarig ah kadib Markii ay Sameysay ku Takri fal Awoodeed →